चमत्कारिक गुगल ग्लास (Google Glass) | मेरो कलम
– सडकमा हिड्दै गर्दा कोहि युवती गुनगुनाउदै छिन् । तपाईले उनलाई चिन्नुभएको छैन तै पनी तपाईतिर हेर्दै अनेक हाउभाउ गरिरहेकी छिन् । चिनेचिने जस्तो गर्दै मुस्कुराउदै अघिल्तीर वढीरहेकी छिन् । युवतीको त्यस्तो पारा देखेर तपाईलाई लाग्दो हो उनी तपाईतिरै आकर्षित छिन् । त्यसैले आफुले नचिने पनि उनीसगँ केहि मिठा कुरा गर्ने तपाईको सोच छ भने पर्खनुस् । तपाई भ्रममा हुनुहुन्छ । खासमा ती युवतीको ध्यान तपाईतर्फ पटक्कै छैन । बरु उनी त आफुले लगाएको गुगल ग्लास (चश्मा) मै हराएकी छन् । गुगल चस्माको कमाल देखेर मुस्कुराउदै, गुनगुनाउदै हिडिरहेकी पनी हुनसक्छिन् । हो,बादशाह सर्च ईन्जिन गुगलले यस्तै अविश्मरणिय चश्मा चाडै बजारमा ल्याउदैछ । त्यो चश्मा हुनेछ जहाँवाट तपाई भर्चुअल विश्वमा रमाउन सक्नुहुन्छ । अर्थात ईन्टरनेटको त्यो भर्चुअल विश्वलाई तपाई आफ्नो आखाँमा टाँसेर हिड्न सक्नुहुन्छ ।
वढ्दो प्रविधीको विकासले विश्वलाई नजिक ल्याएको छ । सुचनाप्रविधीमा अव त्यस्तो चमत्कार हुदैछ,जसवाट तपाई भर्चुअल विश्वलाई आफ्नो आखाँमै राख्न सक्नुहुन्छ । चाडै बजारमा आउदैछ गुगल चस्मा । यो त्यस्तो चस्मा हो,जसको माध्यमले विश्वलाई नजिकभन्दा नजिकवाट नियाल्न पाईनेछ । गुगल चश्मा लगाईसकेपछि स्तरिय क्यामरा र मोवाईल मात्रै हैन कम्प्युटरको पनी आवश्यकता नपर्न सक्छ । चश्मामै फिट गरिएको क्यामराको मद्धतले फोटो तथा भिडियो खिच्ने काम गरिन्छ ।
मोबाईलमा साधारणतया फोन, एसएमएसको लागी प्रयोग गरिन्छ । स्तरिय मोवाईल हुनेहरुले धेरै भन्दा धेरै एप्सहरु पनी चलाउछन्, गेम खल्छन्, म्युजिक भिडियो हेर्छन, सुन्छन् । कम्प्युटरले पनी हाम्रो दैनिकीलाई सरल वनाउदै कामकाजलाई सहज बनाईरहेको हुन्छ । हामी कम्प्युटरवाटै ईमेल ईन्टरनेट प्रयोग गर्छौ, भने धेरैभन्दा धेरै जानकारीमा अपटु डेट भईरहेका हुन्छौ । अझ सोसिएल मिडिया फेसवुक ट्वीटरमा रम्दै स्काईपमा विदेशीएका साथीभाई आफन्त सगँ कुराकानी गर्न त अझ कहाँ छोड्छौ र ? यतिमात्रै हैन धेरैभन्दा धेरै काम कप्युटरवाट दैनिक गरिरहेका हुन्छौ । क्यामरा,मोबाईल एवं कम्प्युटर लगायतवाट गरिदै आएका कामकाजहरु गुगल चश्मा एक्लैले भने पलभरमै गर्नेछ । मात्र तपाईको निर्देशन भए पुग्छ त्यो पनी मौखिक । चश्मा मेरो ईमेल चेक गरिदऊ त । चश्माले तुरुन्तै ईमले चेक गरिसक्छ । र तुरन्तै ईनवक्समा भएका ईमेल आखै नजिक्याएर देखाईदिन्छ । मौखिक रुपमै भन्न थाल्नुस् चश्माले ईमेलमा लेख्न सुरु गर्छ, तुरुन्तै ईमले पनी रिप्लाई गरिदिन्छ । सोसिएल मिडियामा फोटो खिचेर अपलोड गर्नुपर्ने भयो, मात्र मौखिक निर्देशन दिए पुग्छ सवै काम एकै पलमा चश्माले गर्नेछ । फेरी चश्मालाई निर्देशन दिनुस् म मेरो घरमा फोन गर्न चाहन्छु चश्मा मेरो घरमा फोन लगाईदऊ त । तुरुन्तै चश्माले घरमा फोन लगाउने काम गर्छ । कुनै जमघटमा जादैहुनुहुन्छ आफ्ना आफन्तको तस्विर/भिडियो विना कुनै झन्झट कैद गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनी सहज रुपमै सम्भव छ । गुगलले गुगल चश्माको फिचर समेटेर युट्वमा भिडियो अपलोड गरेको छ । सन् २०१२ को अप्रिलमा अपलोड गरेको सो भिडियो देखेर विश्वका मानिसहरु चकित भएका थिए । यूट्युवमा अपलोड गरिएको सो भिडियो स्वयं गुगल चश्माले नै कैद गरिरहेको देखाईएको छ । दुई मिनेट ३० सेकेन्डको उक्त भिडियो २० करोड भन्दा वढीले हेरिसकेका छन् ।
गुगलले अपलोड गरेको उक्त भिडियोमा एकजना मानिसले चश्मा लगाएको छ, त्यही चश्माको मद्दतबाट उसले विहानको तापक्रमदेखी लिएर टेक्स म्यासेज पढ्न, म्यासेज पठाउन, अनलाईन कन्सर्टको लागी टिकट वुकिङ गर्न , लाईवेरी सम्मको नक्शा पत्ता लगाउन, आफ्नो साथी र आफुविचको दुरी पत्ता लगाउन, फोटो खिच्न, भिडियो च्याट गर्न गुगल चश्माकै प्रयोग गरेको देखाईएको छ । गुगलले भनेको थियो, ‘प्रोजेक्ट ग्लास वान डे’ त्यो समय आईसकेको छ । सन् २०१३ को अन्त्यसम्ममा १५ सय अमेरिकी डलर अर्थात एक लाख ३० हजार नेपाली रुपैयाँको हाराहारीमा उक्त चश्मा उपलव्ध हुनेछ ।
~गुगल ग्लास प्रविधि ~
अविश्वसनिय गुगल चश्मामा एन्ड्रोईड अपरेटिङ सिस्टमको प्रयोग गरिएको छ । साथै उक्त चश्मामा सिपियु, ¥यामको पनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै डाटा संकलनको लागी एसिलेरोमिटर,गाईरोस्कोपका साथै वायरलेस रेडियो प्रविधी जडान गरेको जनाएको छ । फेस रिकगनिसन सफ्टवेयरले मानिसहरु सजिलै छुट्याउन सक्नेछ । त्यस्तै गुगल चश्मामा सुन्न तथा वोल्नको लागी साउण्ड सिस्टम,फोटो खिच्न र भिडियो कैद गर्नको लागी क्यामरा, लगायत चटप्याटको व्यवस्था गरेको छ । साधारणतया हामीले लगाईने चश्मामा यी भनिएजती प्रविधी जडान गर्दैगर्दा उक्त चश्माको आकार प्रकार कत्रो हुन्छ होला ? अनुमान लगाउनुस् त । तपाई गुगल चश्मा निकै झन्झटिलो होला भन्ने ठान्न सक्नुहुन्छ । धन्दा नमान्नुस्, गुगलले आफ्नो व्लगमा लेखेको छ अरु साधारण चश्मा र गुगल चश्मामा केहि फरक छैन ।
~ गुगल ग्लास चाहियो ? ~
गुगलले जनाए अनुसार यसै वर्ष अर्थात सन् २०१३ को अन्त्यमा गुगल चश्मा सर्वसाधारणले लगाउन पाउनेछन् । यो चश्मा बजारमा सार्वजनिक भएकै समय आफ्नो हातमा पार्नकै लागी ठुलै मेहनत गर्नुपर्नेछ । एप्पलको आईफोन ५ लिन मानिसहरु हप्तौ दिन सडकमै लाईन वसेका थिए भन्दा हामी चकित भएका थियौ, गुगल ग्लास लिनको लागी पनी त्यस्तै अवस्था आउदैन होला भन्न सकिन्न । ईन्टरनेटमा देखिएको गुगल चश्मा प्रतिको क्रेज हेर्दा यती भनिरहन कुनै गाह्रो छैन । अमेरिकामा गुगल चश्मा मानिसको हातहातमा पर्नासाथ पहुच भएका नेपालीहरुले पनी सजिलै प्रयोग गनेछन् । अनि तपाईपनी उक्त गुगल चश्मा प्रती जिज्ञासा राख्न तथा जानकारी चाहनुहुन्छ भने गुगल डटकम स्ल्यास ग्लास स्लायस स्टाट मा लग ईन गरेर वुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ ।
~ चिया गफमा गुगल ग्लास ~
विराटनगरका तुषार खतिवडा हाल काठमाण्डौमा व्याचुलर ईन कम्प्युटर ईन्जिनियरिङ पढीरहेका छन् । वागबजार स्थित एक खाजा पसलमा खाजा खादै गर्दा उनी भन्छन् युट्वमा सो अविश्सनिय गुगल चश्माको फिचर हेरेर छक्क परे । साथै उनी थप्छन् अहिल्य विश्वमा गुगल चश्माले बजार तताएको छ । अफिसमा त्यै गुगल चश्माकै चर्चा हुन्छ , कलेजका साथीहरु पनी गुगल चश्मामै छलफल गरिरहेका हुन्छन् । जताततै गुगल चश्माको कुरा सुनिरहेको हुन्छु । उनले खाजा खादै गर्दा गुगल चश्माको सम्पुर्ण फिचर सुनाए । रोल्पाका उमेश सुवेदी तुषार सगै सोहि होटलमा तरकारी समोसा खादैछन् । उनी मास्र्टस् ईन जर्नालिजम्का अन्तिम वर्षका विद्यार्थी हुन् । तुषारको कुरा सुनेर उमेश छक्क परेका छन् उनी तुषारलाई सोध्छन् ? गुगल चश्माले त अव मानिसलाई एकलकाटे त वनाउदैन ? तुषार कुरा जोड्छन् , एकलकाटे मात्रै हैन अव खान, सुत्न नै विर्सिन्छन् । भर्चुअस संसारमा रमाउनेहरुको लागी त यो भन्दा ठुलो माध्यम के नै हुन सक्छ र उनले प्रतिप्रश्न गरे । अव सडकमा हिड्दैगर्दा मानिसहरु गुगल ग्लासमै रमाउन थालेपछि सगै हिडेको साथीलाई विर्सिनेनै भएनी तुषार भन्छन् । उमेशले सोध्छन्, यस्तो आश्चर्यचकित चश्मा कहिल्य लगाउन पाईएला त ? तुषार मुस्कुराउदै छन् उनले भने यो वर्षको अन्तिममा गुगलले त्यो अविश्वसनिय चश्मा बजारमा ल्याउदैछ । पहिल्य विश्वका धनि देशका नागरिकले प्रयोग गर्नेछन्, नेपालीहरुको लागी त्यो सहज र सरल भईसक्दा नसक्दै अर्को प्रविधीले विश्व पिटिसकेको हुनेछ । उमेश सहि थप्छन् हुन त गुगलले बजारमा ल्याउने भनेको गुगल चश्मा जस्तै एप्पलले पनी आईग्लास ल्याउने भनिसकेको छ । ~ ७ चैत २०६९ मा अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित ।
व्यस्त हुनुहुन्छ? किन चिन्ता ‘यसरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरौन’
Nepali April 25, 2013
Hari bool March 21, 2013 Log in to Reply
be careful if someone wear google glasses and look at u don't think that person like u. but think that he or she wanna u to look it
thank for information and your heard work .
SB Gautam March 21, 2013 Log in to Reply
owww Thanks for creative Comments : cheers !!!
MILAN79266 May 9, 2013 Log in to Reply
Amazing glass wanna buy the glass .
Shanti Bikram Gautam July 22, 2013 Log in to Reply
If you want, you can order 🙂 Thanks for attendance !